Ukwazi ukuba abantu base-Australia babulisana njani | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukwazi indlela abantu base-Australia ababulisa ngayo
Isabella | | Ostreliya
Ukuba kwiholide yakho elandelayo ufuna ukuthatha uhambo oluya e-Australia okanye ungathanda ukuya kufunda kweli lizwe, enye yeemeko omele ukwazi ukuzilungiselela ngokukhawuleza ebomini kukho amasiko kunye nemikhwa yayo yemihla ngemihla.
Abanye abantu abahlala kwilizwe elitsha banokubangela ukothuka kwenkcubeko, ngakumbi njengoko beqhela imeko yabo entsha. Ukuhlala kuluntu olunjengolo lwase-Australia zininzi izinto onokuzenza, eziza kukunceda ukuba uziqhelanise ngokukhawuleza kwaye uzive ngathi uyintlanzi emanzini.
Xa unxibelelana nabemi bokuqala, nokuba ubuze indlela okanye uhlobo oluthile lolwazi, kuya kufuneka ubabulise kwaye uzazise ngokufanelekileyo. Ngesi sizathu, kweli nqaku siza kufunda ngendlela abantu base-Australia ababulisa ngayo.
1 Banjani abantu base-Australia?
2 Injani imibuliso eOstreliya?
3 Zeziphi iifomula ezisetyenziselwa ukubulisa e-Australia?
4 Zinjani iintetho?
5 Abantu base-Australia babulisana njani epatini?
6 Ezinye iindlela zokubulisa kumazwe aMazwe aManyeneyo
Banjani abantu base-Australia?
Ikwabizwa ngokuba yi "Aussies", abantu baseAustralia ngokubanzi banobubele, bathembekile, badibene kwaye abakho sikweni kwimicimbi yabo. Banandipha inqanaba elifanelekileyo lemfundo, eliguqulela kumathuba amaninzi emisebenzi kunye nomgangatho ophezulu wobomi. Le yokugqibela ibonakala kubuntu babo evulekileyo, evulekileyo kwaye ekhululekile.
Abantu base-Australia ngabantu nje abaqhelekileyo abaxabisa kakhulu iinzame nokusebenza nzima, ngaphandle kokwahlula phakathi kweeklasi zentlalo. Babonakaliswe ngengqondo evulekileyo, intlonipho yezinye iinkcubeko kunye nokubuk 'iindwendwe kwabo basemzini. Ngamafutshane, abantu base-Australia ngabantu abashushu, abasondeleyo nabanobuhlobo.
Injani imibuliso eOstreliya?
Xa sithetha ngendlela ubuliso lwase-Australia olukuyo, kufuneka sithathele ingqalelo imeko apho ukudibana okuqala khona incoko kwenzeka. Ngamanye amagama, usapho olungaqhelekanga okanye indibano yabahlobo ayifani nentlanganiso yomsebenzi esesikweni.
Umzekelo, abantu base-Australia phakathi kwabahlobo babulisana ngendlela yothando: ngokuncamisa esidleleni okanye ngokwangana okufutshane. Ngoku, nokuba yintlanganiso yeshishini okanye eyunivesithi, abantu baseAustralia babulisana ngobubele nangokusesikweni ngokuxhawulana okufutshane kunye noncumo.
Ngokwesiko lase-Australia kwaye njengakwamanye amazwe amaninzi, imibuliso kufuneka yenziwe ekuqaleni nasekupheleni kwentlanganiso, kunye naziphi na iindwendwe ezinokufika ngexesha lentlanganiso.
Ukongeza, abantu base-Australia bahlala bethetha nabanye abantu besebenzisa amagama abo kwintlanganiso yokuqala, ke kubalulekile ukuba uwakhumbule amagama abo bakungenelelayo xa beziswa kuwe. Kubalulekile ukuba ujonge umntu emehlweni xa ubulisa omnye umntu. Lo ngumqondiso wentlonipho kwaye ukwabonisa ukuba umamele kwaye umamele into ethethwa ngomnye umntu.
Zeziphi iifomula ezisetyenziselwa ukubulisa e-Australia?
I-G'day: Ifom efinyeziweyo "Usuku olungileyo" yeyona ndlela iqhelekileyo nengacwangciswanga yokubulisa omnye komnye kwaye ibizwa ngokuba "ngumhla wosuku". Ingasetyenziselwa imini nobusuku.
"Ow ya goin 'mate?": Yifomula efinyeziweyo eyaziwayo "Uhamba njani mfondini?" oko kuthetha ukuba unjani.
"Cheerio": Isetyenziselwa ukuvalelisa.
"Cya Le Arvo": Njengoko uza kubona, abantu base-Australia bayathanda ukushunqulela amagama. Le fomyula ithetha ukuba "Ndiza kubona ngale mvakwemini." Basebenzisa ibinzana elithi arvo ukubhekisa emva kwemini kuzo zonke iimeko.
"Hooroo": Ithetha ukuba ndiza kubona kamva.
"Toodle-oo": Enye indlela yokuvalelisa.
"Mholo kusasa Molo.
"Molo ngokuhlwa": Molo ngokuhlwa.
"Ulale kakuhle ebusuku.
"Ndiyavuya ukukwazi": Ndiyavuya ukukwazi.
"Kuhle ukukubona": ndiyavuya ukukubona.
Xa kufikwa ekubonakaliseni abesilisa nabasetyhini kwimeko esesikweni, amabinzana athi "Señor", "Señora" kunye "Señorita" asetyenziswa ngokuba "Mnu", "Nkskz." kunye no "Nkosazana" amabinzana abo ngesiNgesi.
Ukuba ngaba yingcaciso engacwangciswanga phakathi kweqela labahlobo, amabinzana anje ngala "Ngumhlobo wam uPeter" (ngumhlobo wam uPeter) okanye "Lo nguAnn endisebenza naye" (nguAna, umntu endisebenza naye) angasetyenziswa.
Abantu base-Australia babulisana njani epatini?
Ungasebenzisa nayiphi na ifomula endiyibonisileyo kwimihlathi engaphambili. Nangona kunjalo, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba xa umenyiwe kwitheko okanye kwi-barbecue kulisiko ukuba uze nento eselwayo (umzekelo ibhiya, iwayini okanye iziselo ezihlwahlwazayo) ukonwabela iqela kunye nokwakho.
Kwakhona, e-Australia kuthathwa njengokuziphatha okuhle ukunxibelelana nomphathi weqela ukubona ukuba bafuna okanye bafuna ukuba uze nantoni na eyenye. Kwelinye icala, ukuba umenyelwe kwisidlo endlwini yomntu othile, kulisiko ukuzisa isipho kumbuki zindwendwe xa ufika, njengesixa seentyatyambo, ibhokisi yetshokholethi okanye ibhotile yewayini.
Ezinye iindlela zokubulisa kumazwe aMazwe aManyeneyo
I-Commonwealth ngumbutho wokuzithandela wamazwe angaphezu kwamashumi amahlanu apho amakhonkco enkcubeko, ezembali kunye nenkcubeko enxulunyaniswa khona, uninzi lwazo sisiNgesi ulwimi olusemthethweni.
Nangona ilizwe ngalinye linenkqubo yalo yezopolitiko kwaye lizimeleyo, amanye anjengeOstreliya okanye iCanada ayaqhubeka nokugcina unxibelelwano nobukhosi baseBritane. Ke ubulisa njani kumazwe angamalungu eCommonwealth njengeCanada okanye iNgilane?
Abantu baseKhanada ngabona bantu banobuhlobo emhlabeni, eliguqulela kwimibuliso abayisebenzisayo ukunxibelelana nabanye.
Umzekelo, eQuebec eyona mibuliso isetyenziswa kakhulu ngu "Bonjour" no "Ça va?" ngelixa eMaritimes abantu bayabulisana ngo "Molo" okanye "Molo" olula olandelwa ngumntu onobuhlobo "How do 'doin'?" Kwelinye icala, i-Ontario neToronto zikwasebenzisa iifomula ezifanayo.
Kuyatshiwo ukuba iAlberta kunye neSaskatchewan kulapho kuhlala khona abantu abanobuhlobo kweli lizwe kwaye uyakuhlala ufumana abantu abazimiseleyo ukuncokola ngokungafaniyo nakwizixeko ezikhulu apho abantu bahlala bengxama kakhulu.
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokusebenzisa amaNgesi ukubulisa kukubambana ngesandla kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuyenza xa umntu esaziswa komnye umntu okanye ngaphambi kokuqala intlanganiso kwilizwe leshishini.
Ngokwesiqhelo kubulisa kuphela ngokwanga kwesinye sezihlathi xa abangeneleli bezihlobo okanye abantu ababaziyo kwaye kukho uthando phakathi kwabo. Ngokungafaniyo namazwe afana neSpain, ayisiyiyo eyona nto ixhaphakileyo ukuhlala ubulisa ngokwanga.
Ezinye iindlela zokubulisa zezi:
"Molo okanye Molo": Ithetha "molo".
"Unjani?": Ithetha ukuba unjani kwaye kuhlala kuthethwa njalo kwiimeko ezisemthethweni ezihamba nokubanjwa ngesandla.
"Unjani?": Ikwathetha ukuba "unjani" kodwa isetyenziswa kwiimeko ezingacwangciswanga. Ihlala iphendulwe ngo "Ndiyaphila enkosi, nawe?" Oko kukuthi "ndiyaphila, enkosi nawe?"
"Ndiyavuya ukukwazi": Eli binzana lithetha "ndiyavuya ukukwazi" kwaye uhlala ethetha ngelixa uxhawulana. Idla ngokuphendulwa ngokuthi "ndiyavuya ukukwazi nawe" (ndiyavuya ukukwazi nawe) kwaye kusoloko kusithiwa xhawula izandla.
"Ndiyavuya ukukwazi": Yenye ifomula yokubonisa ukuba umntu othile uyavuya ukudibana nomnye umntu. Ukuphendula, "naye" wongezwa ekupheleni kwesivakalisi njengakwimeko yangaphambili.
Sebenzisa ezi ngcebiso zincinci kwiintlanganiso zakho ezizayo kwilizwe laselwandle kwaye uya kubulisa njenge "Aussie" yokwenyani!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukwazi indlela abantu base-Australia ababulisa ngayo
ezo carepenis ziyabulisana njenge gay kwaye zincanca iqhude lamadoda nabafazi fart hleka isini kwaye babambe iesile kunye namantshontsho kunye neminwe yabo ye-esile iiyure ezingama-3000 ukuphulula amalungu esini nokuphela kwe-shitdddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa